နတ်သျှင်နောင်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ – PoemsCorner
မှတ်ချက်။ ။ [ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူများရှင် မင်းတရားကြီး၏ ညီတော် တောင်ငူဘုရင် မင်းခေါင်နှင့် လေးကျွန်းမိဖုရားတို့ ‎သင့်မြတ်ရာတွင် မင်းရဲသီဟသူ ခေါ် တောင်ငူရွှေနန်းတည် မင်းတရားကို မြင်သည်။ ထို ရွှေနန်းတည်မင်းကို ‎ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူများရှင် မင်းတရားကြီး၏ မိဖုရားဖြစ်သူ အင်းဝရွှေနန်းကြော့ရှင်မင်း၏ သ္မီးတော် ‎သီရိဘုန်းထွတ်၊ ဘွဲ့တော် စန္ဒာဒေဝီ မိဖုရားကြီးမှ မြင်သော သ္မီးတော် ခင်စောနှင့် သင့်မြတ်စေရာတွင် ‎သားတော်ကြီး နတ်သျှင်နောင် နှင့် ညီတော် မင်းရဲကျော်စွာ၊ မင်းရဲသီဟသူ၊ မင်းရဲကျော်ထင် တို့ကို ‎ဖွားမြင်တော်မူသည်။ နတ်သျှင်နောင်၏ ဘွားသက္ကရာဇ်ကိုကား အတိအကျ မသိရပေ။ ‎ ]‎
(သက္ကရာဇ် ၉၄၀-ပြည့်နှစ်တွင် ဖွားမြင်၏ ဟု မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ-၆ (နီ-ပစ်) စာမျက်နှာ ၁၃၃-၁၃၅ တွင် ဖော်ပြထား၏။ စာဆိုစစ်ဘုရင် ‎တွင် ကြည့်ပါ။)
နတ်သျှင်နောင် မင်းသား၏ ခမည်းတော် မင်းရဲသီဟသူသည် သက္ကရာဇ် ၉၆၄-ခုနှစ် နတ်တော်လတွင် တောင်ငူရွှေနန်းကို ‎အသစ်ထပ်မံ ဘန်ဆင်းတော်မူ၍ တောင်ငူဘုရင်ဟူသောအမည်ဖြင့် စိုးစံတော်မူသည်။ ရွှေနန်းတည်သည်ကို အစွဲပြု၍ ‎လည်း ရွှေနန်းတည်မင်းဟု ခေါ်သည်။ အထွတ်အမြတ်သို့ရောက်သည့်အခါတွင် သားတော်ကြီး နတ်သျှင်နောင်မင်းသားကို ‎မဟာဥပရာဇာ ဟူသော အမည်ဖြင့် အိမ်ရှေ့နှင်းတော်မူ၍ ဇင်းမယ်ဘုရင်နှမတော် ရာဇဓာတုကလျာနှင့်လည်း စုံဘက် ‎တော်မူသည်။
နတ်သျှင်နောင်သည်စောင်းညှင်း တီးမှုတ်မှု၌ လိမ္မာလှသည့်ပြင် ကဗျာဖွဲ့ဆိုသီကုံးမှု၌လည်း ဝါသနာထုံသည်။
မြန်မာပြည်၌ အထွတ်အမြတ်သို့ရောက်တော်မူကြသော မင်းအပေါင်းတို့အနက် နတ်သျှင်နောင်သည် ကဗျာလင်္ကာဖွဲ့ဆိုမှု၌ ‎ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော ဘုရင်စာဆိုတဦးဖြစ်သည်။ ထိုမင်း၏ကဗျာများသည် များစွာနူးညံ့သိမ်မွေ့နက်နဲလှ၍ သြဇဂုဏ် ‎လည်း မြောက်လှပေသည်။ ကဗျာသီကုံးဖွဲ့နွဲ့မှုတွင် သိမ်မွေ့နက်နဲသော ဉာဏ်ဖြင့် ဆန်းပြားစွာ ဖွဲ့တတ်သည်နှင့်အမျှ ‎အရာရာ၌ပင် လွန်စွာဆန်းပြားတတ်သော ဉာဏ်ပရိယာယ်ကိုသုံးစွဲလွန်းလှ၍ တခါတရံ အမှောက်အမှားနှင့် တွေ့ကြုံတော် ‎မူရ ရှာလေသည်။ မင်းသားသည် ငယ်စဉ်ကပင် ဇင်းမယ်ဘုရင်နှမတော် ရာဇဓာတုကလျာမင်းသ္မီးနှင့် ရည်ငံရင်းရှိသည့် ‎အတိုင်း ကဗျာဖွဲ့ဆိုရာ၌လည်း ထိုမင်းသ္မီးကို ရည်ရွယ်ဖွဲ့ဆိုသည်သာ များသည်။
နတ်သျှင်နောင်မင်းသားသည် သက္ကရာဇ် ၉၇၀-ခုနှစ် ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၆-ရက် သောကြာနေ့တွင် ဘခင်၏အရိုက်အရာ ‎ဖြစ်သော ရွှေထီးရွှေနန်းကို စိုးစံတော်မူသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် အဝမင်းပြည်သော အနောက်ဘက်လွန် မင်းတရားသည် ‎တောင်ငူသို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်တော်မူလေသည်။ တောင်ငူဘုရင် နတ်သျှင်နောင်သည် စစ်သည်အလုံးအရင်း အင်အား ‎ရှိသမျှနှင့် ခံတော်မူသည်။ တောင်ငူမြို့ကို ရန်သူ အဝမင်း၏တပ်တော်များက ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားသဖြင့် မြို့တွင်းသားတို့ ‎အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးကြသည်နှင့် တောင်ငူမြို့ ပြာဿာဒ်ကျောင်းဆရာတော်နှင့် ညီတော် မင်းသားများကပါ ‎အညံ့ခံမှ သင့်မည်ထင်ကြောင်းနှင့် နောင်တော် တောင်ငူဘုရင်ကို လျှောက်တင်ကြပါသော်လည်း ပဋ္ဌမသော် တောင်ငူ ‎ဘုရင်က တင်းမာလျက်ပင် ရှိနေသေးသည်။ နောက်မှ အားမတန် မာန်လျော့၍ အညံ့ခံပြီးလျှင် မြို့တော်ကိုအပ်ရသည်။ ‎အနောက်ဘက်လွန်မင်းသည် တောင်ငူကို အလိုပြည့်သော် မင်းညီမင်းသားများနှင့်တကွ မှူးမတ်သေနာပတိတို့အား သစ္စာ ‎တော်ပေးသည်။ တောင်ငူဘုရင်ကိုလည်း သစ္စာတော်ပေး၍ တောင်ငူနန်းကို မှန်ကင်းချပြီးလျှင် လက်အောက်ဘုရင်ခံငယ် ‎အဖြစ် စိုးမိုးစေရန် မြို့ကို အပ်နှင်းတော်မူသည်။
အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီးသည် အရေးတော်ပြီး၍ နေပြည်တော်သို့ ပြန်တော်မူလျှင် တောင်ငူဘုရင်က ‎စောင်းတတ်၊ ညှင်းတတ်သူတို့အားလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ပေးလိုက်သည်။ (ဤသည်တွင် ရဝေရှင်ထွေး၊ မင်းဇေယျရန္တမိတ်၊ ‎ရှင်သံခို တို့သည် ဟံသာဝတီသို့ လိုက်ပါသွားကြရကုန်သည်ဟု ဆိုသည်)။ ဘိုးတော် ဟံသာဝတီ ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီး ‎လက်ထက်တော်တွင် သိန်းဃိုဠ်ကျွန်းမှ ရောက်သော သပိတ်တော် စွယ်တော်မြတ်တို့ကို ၉၆၁-ခုနှစ် ငါးဆူဒါယကာနှင့် ‎တောင်ငူဘုရင်တို့ အရေးတော်ပြီးကြလျှင် တောင်ငူ ကေတုမတီသို့ ဆောင်ယူ၍ လွှတ်တော်ရှေ့တွင် ရွှေပြဿာဒ်နှင့် ‎တင်ထားကိုးကွယ်လျက် ရှိသည်ကိုလည်း ရတနာပြဿာဒ်တွင် တင်၍ နေပြည်တော်သို့ အနောက်ဘက်လွန်မင်း ‎ပင့်ဆောင် သွားလေသည်။
Leave comment5Comments & 2,069 views
My dearest person from Myanmar’s History is “Nat Shin Naung”. I like him very much n happy to read this biography!!!!
Many thanks for sharing this post!! ^_^
By: Kazumi at May 22, 2010
အခုလို နတ်သျှင်နောင်ရတုတွေကိုတင်ပေးထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စစ်တိုက်ရင်းကဗျာရေးတဲ့နတ်သျှင်နောင်ကိုအားကျလို့ ပါ။
By: ဇေယျာရှိုင်း at Dec 17, 2011
ကျေးဇူးပါ … ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်
By: harry at Dec 17, 2011
နတ်သျှင်နောင်ကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကြားဖူးတာ ဖတ်ချင်နေတာကြာပြီမလွယ်လို့ ယခုမှဖတ်ရတော့တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
By: phoekyaw at May 1, 2012
ယခုလို မြန်မာရတုကဗျာများအားမတိမ်ကောစေရန် စောင့်ရှောက်ထားသည့်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး အနေနှင့်ဂုဏ်ယူမိပါသည်
By: ညီညီသွင် at Nov 15, 2013